အမိန့်ပြန်တမ်း.မရလို့..မကျွတ်လွတ်နိုင်တဲ့..ရုံးစောင့် - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / အမိန့်ပြန်တမ်း.မရလို့..မကျွတ်လွတ်နိုင်တဲ့..ရုံးစောင့်
Apann Pyay 8:22 AM ပရလောကအကြောင်း Edit
တစ်နေ့သောညနေပိုင်း၌.. ကိုလှမျိုး တစ်ယောက် ရာထူးတိုးဖြင့်.အပြောင်းအရွှေ့ ကျသဖြင့် မိတ်ဆွေ အပေါင်း အသင်းများအားနှုတ်ဆက် ပွဲလုပ်ပြီး..ဧည့်ခန်း၌ ထိုင်နေသည်။
" သမီးရေ..ခြံရှေ့မှာ. ဧည့်သည် လာတယ်.. သွားကြိုလိုက်ပါအုံးကွယ်"ဟု သမီးအငယ်မ ကို သွားကြိုခိုင်း လိုက် သည်။
"ဟေ့ကောင် လှမျိုးး မင်းရာထူးတိုးပြီ ဆိုကွ"ဟုပြောရင်း လာနေသူက..ကိုလှမျိုးအကြီးတန်းစာ ရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က..ဆရာဖြစ်သူ ဦးကျော်သူပင်ဖြစ်သည်။
"ဆရာ လာဗျာ ထိုင်အုံးးး ကျွန်တော်လည်း ခဏကမှ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေပြန်သွားလို့ နားနေတာဗျ...သမီးရေ. ဆရာ့အတွက်.. စားစရာလေး ဘာလေး တည်ခင်းပါအုံးကွယ်"
"ကောင်းပါတယ်ကွာ..ဝန်းထမ်း ဆိုတော့..ကျရာနေရာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသကိုးး"
ဆရာ တပည့်နှစ်ယောက် စပ်မိစပ်ရာစကားပြော ကြရင်းးဦးကျော်သူ က
"ဒါနဲ့မင်းကိုပြောရအုံးမယ်ဟေ့..ငါ..မြတုံမြို့ လေးမှာ...တာဝန်ကျတုံးကပေါ့ကွာ..အခု ငါက ပင်စင်တောင်ယူပြီးပြီ ဆိုတော့နှစ်တွေကကြာပါပြီ" ဟုအစပြုရင်းးး.......
ကိုကျော်သူ တစ်ယောက်..အပြောင်း အရွှေ့ဖြင့် တာဝန်ကျရာ မြတုံမြို့လေးသို့ ..မီးရထားဖြင့် လိုက်ပါ လာခဲ့သည်။ လူပျို လူလွတ်တစ်ယောက် ဖြစ်သဖြင့် တာဝန်ကျရာမြို့လေးသို့ပေါ့ပေါ့ပါး ပြောင်းရွှေ့နေလို့ ရ သည်။ အခက်အခဲမရှိ။
တစ်ချို့သော ပစ္စည်းတွေက တန်ဆာ ရိုက်ပြီး ပို့ ထားပြီးပြီ။ အခုတော့လွတ်လွတ် လပ်လပ် အိတ် ကလေးတစ်လုံးဖြင့်သာ လာခဲ့သည်။ ရထားကြီးကလည်း တစ်ဘူတာဝင် တစ်ဘူတာထွက် အရှိန်နှင့်ခုတ်မောင်းလာခဲ့သည်။ ကိုကျော်သူလည်း ရှုခင်းတွေကြည့်ရင်းလိုက်ပါ လာခဲ့ရာညနေစောင်းလာလေပြီ။
မြတုံမြို့လေးသို့နောက် အချိန်ကြာကြာ စီးရအုံးမည်။ ည ၈နာရီခန့်မှသာ ရောက်မည်။
"ပူးးးးးးးပေါ်"ဆိုသော ရထားဥသြဆွဲသံနှင့် အတူ မြတုံမြို့ဘူတာသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့လေပြီ။ လူသူ အဆင်း နည်းသောမြတုံ ဘူတာလေးမှာ မီး လေးကလည်း ခပ်မှိန်မှိန်သာ ရှိသည်။ တောမြို့လေး ဆိုတော့လည်း ဟုတ်ပေ မပေါ့။
ကိုကျော်သူ ခရီးဆောင်အိတ်ကလေးဆွဲကာ ဘူတာက ထွက်လာတော့..ဘူတာရှေ့မှာ ဆိုက်ထား တဲ့ ဆိုက်ကားလေး သုံးလေးစီးသာရှိသည်။
"ဆိုက်ကားငှားမယ်ဟေ့" ဆိုတော့အလှည့်ကျ ဆိုက်ကားသမားလေး က
"စီးပွားဘဏ်ကို ပို့ပေးပါကွာ "
"ဟုတ်ကဲ့ဗျ"ဟုပြောရင်း ဆိုက်ကားသမားလေး က သူ့လက်ထဲက ခရီးဆောင်အိတ်ကို ယူပြီး ဆိုက်ကား
ပေါ်တင်ကာ.. "တက်..ဆရာ" ဟုပြောရင်း ဆိုက်ကားလေး နင်းထွက်ခဲ့လေသည်။
ဆိုက်ကားသမားလေးနဲ့ စကားတပြောပြောဖြင့် ခဏကြာတော့ ဆိုက်ကားသမားလေး က
ကိုကျော်သူ တစ်ယောက် ၁၅ကျပ်တန် တစ်ရွက် ထုတ်ပေးရင်း နာရီ တစ်ချက်ငုံ့ကြည့်မိသည် ။
ကိုးနာရီတောင် ထိုးသွားပြီ။ ဆိုက်ကား သမားလေး က နှုတ်ဆက်ရင်း ထွက်သွားလေပြီ။ ကိုကျော်သူ တစ်ယောက် အထုတ်လေး မပြီးရုံး ဝင်းတံခါးပေါက်ရှေ့ ရပ်နေမိသည်။
ရုံးကလေးမှာ တစ်ထပ်တိုက် ကလေးသာဖြစ်ပြီး။ တာဝန်ကျရာ ဝန်ထမ်း အိမ်ကလေး က အိမ်ခြေပုလေး သရက်ပင်တွေကြားထဲမှာ..
"ဆရာ..က ဒီကို တာဝန်ကျတဲ့ ဆရာ အသစ်ထင်တယ်" ဟုယောက်ျားသံ သြသြကြီးကြားမှ သူ့ရှေ့တွင်ခြံ
တံခါးဖွင့်ပေးနေသော ရုံးစောင့်ဟု ထင်ရသော အသက်၄၀ကျော် အရွယ်လူကြီး တစ်ယောက်။ အဲ့ဒီတော့ မှ သူလည်းခြံထဲ ဝင်ဖို့သတိရသည်။
ထိုလူကြီးက. သူ့လက်မှ အိတ်ကို ကူသယ်ပေးရင်း
"လာ.လာ ဆရာ."ဟုခေါ်ပြီး ဝန်ထမ်းအိမ်လေး ဆီသို့ ခေါ်လာခဲ့သည်။
ဟုချွဲချွဲ ပြစ်ပြစ် အူလိုက်သောခွေးသံ ကြီးကြောင့် ကြက်သည်း ထသွားရသည်။ အိမ်ထဲတွင်လဲ မီးက ခပ်မှိန်မှိန်လေးသာ ထွန်းထားသည်။
"ဆရာ..ဘာစားခဲ့ပြီလဲ..ဘာပြင်ဆင်ပေးရအုံး မလဲ" ဟုမေးနေကာ.အိပ်ယာခင်းတွေပြင်ပေးနေသည်။
"တော်ပါပီ.ဗျာ. မစားတော့ဘူး"ဟုပြောရင်း ရေနွေးကြမ်းငှဲ့သောက်နေမိသည်။
နောက်တော့..ထိုလူကြီးက မီးမှိန်မှိန်အောက်တွင် သူရှေ့ လာထိုင်းပြီး ရေနွေး တစ်ခွက်ငှဲ့ကာ
"ဆရာရေ့.. ကျုပ်တို့မြို့ ကတောမြို့လေး ဆိုတော့ သိပ် မပြည့်စုံဘူးပေါ့ဗျာ...ဟိုဘက်က ဝင်းက ဘောလုံးကွင်း.." ဟု ရှင်းပြနေလေသည်။
"စကားပြောကောင်းနေလိုက်တာ..ဆရာ. ကျွန်တော်က ဒီရုံးက..ရုံးစောင့်. ဦးအောင်ဘ ပါ. ဒီမြို့ခံပါဘဲ.. ကျွန်တော်က ညစောင့်ပေါ့..
မနက်ဆို အိမ်ပြန်တယ်..ကျန်တဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေမြို့ ခံလူတွေ ဆိုတော့မနက်မှဘဲ လာ..ကြတယ်"ဟု ပြောရင်းရေနွေး တစ်ခွက် ငှဲ့လိုက်ပြန်သည်။
"ဆရာက လူလွတ် ဆိုတော့..ကျွန်တော်က..ဒီမှာ အိပ်ရုံပေါ့.. မိသားစု ပါရင်.."ဟို အနောက်က တဲလေး
မှာ အိပ်တယ်..မနက်ဆိုပြန်တော့ ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့"
"စကားပြောကောင်းနေလိုက်တာ..ဆရာ ခရီးပန်း လာတော့ အိပ်တော့လေ" ဟုပြောရင်းရေနွေး အိုးတွေ သိမ်းနေလေသည်။
ကိုကျော်သူလည်း ညည်းစီစီနေသဖြင့်.. "ကျွန်နော် ကိုယ်လက်ဆေးခြင်တာဗျာ"
"အေးအေး" ဟုပြောပြီးရေတွင်း ရှိရာသို့ လာခဲ့သည်။
ရေတွင်းနားရောက်တော့လေအေးတစ်ချက် က မျက်နှာကို ရိုက်သွားသည်။ နောက် ပုပ်အဲ့အဲ့ အနံ့တစ်ခု ဝင်လာသည်။
အကောင်ဘလောင် ပုပ်ပြီးသေထားတာနေမှာပါ ဟုတွေးရင်း ကိုယ်လက် သန့်စင်ပြီး သွားမည် အပြု လှည့် လိုက်ရာ..သူ့ အနောက်တွင် ဘယ်အချိန်ကရောက်နေသည် မသိတဲ့. ရုံးစောင့် ကြီး..သူ့ကိုကြည့်နေ သည်။
"ဆရာလေး အတွက်..တဘက် လာပေးတာပါ" ဟုပြောရင်း သူ့ကို ကမ်းပေးနေသည်။
ကိုကျော်သူလည်း ကမ်းပေးသော တဘက်ကို ယူပြီး အိမ်ရှိရာသို့.လာခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရုံးစောင့်ကြီးပြင်ပေးထားသော.. အိပ်ယာတွင်.. နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော် သွားခဲ့လေသည်။
ရုံးစောင့်ကြီး ကတော့.သူ့နားဘေးနား ကပ်ရက် ခြင်ထောင် တစ်လုံးထောင်၍နှစ်ယောက်သား နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော် သွားခဲ့ကြလေသည်။
"ဆရာ..ဆရာ " ဟု
အော်နိုးနေသော အသံတစ်ခုကြောင့် ကိုကျော်သူ အိပ်ယာမှ နိုးခဲ့ရသည်။ ညက သူ့ဘေးနားမှာ အိပ်နေသော ရုံးစောင့် ကြီးမှာ မရှိတော့.. အိပ်ယာခင်းတွေရော ဒီရုံးစောင့် ငါ့လည်း မနိုးသွားပါလား ပြန်သွားပြီထင်ပ ဟုတွေးရင်း အိမ်အပြင်ဘက်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ အိမ်လေး က ခါးလောက်သာမြင့်သည်။
ညက ရုံးစောင့်ကြီးရဲ့ စက်ဘီးလို့ ထင်ရတဲ့ ယောက်ျားစီး စက်ဘီးကြီးလည်း မရှိတော့ .. ဟုတ်ပြီပြန်သွားပြီနေမှာ..ငါ့ကို ပင်ပန်းလို့ မနိုးသွားတာထင်ပ ဟုတွေးလိုက်သည်။
"ဆရာည.က အဆင်ပြေလားဗျ..ကျွန်တော်တို့.. စောင့်နေသေးတယ်ဆရာရေ.. မိုးချုပ် လာတော့ ပြန်သွား ကြတာ.. ညက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်"..ရုံးဝန် ထမ်းလေးက ဘာအတွေးနဲ့မေးသည် မသိ.
"အဆင်ပြေပါတယ်ကွာ.. ငါမျက်နှာသစ် ဘုရားရှိခိုး ပြီးမှ ရုံးထဲ လာခဲ့မယ်"ပြောရင်း သူ ဆပ်ပြာခွက် ကလေး ကိုင်ကာရေတွင်းဆီသို့ သွားခဲ့သည်။
တစ်နေ့လုံး ဝန်ထမ်းတွေနဲ့. .ရောက်ရောက်ခြင်း နေ့ဖြစ်သဖြင့်.အလုပ်တွေ ရှုပ်နေပြီး ရုံးစောင့်ကြီး အကြောင်းမေ့နေ ခဲ့သည်။ ရုံးဆင်းချိန်ရောက်တော့ ဝန်ထမ်းတွေ အားလုံးပြန်သွားကြပြီ။ ရုံးစောင့်ကြီး ကတော့ ရောက်မလာသေး.. ဒီလိုနဲ့ည နေ နေဝင်သွားပြီ..သူလည်းး အရောင်က ခပ်မှိန်မှိန် ..မီးသီးလေး
ထွန်းရင်းး ..အိမ်ရှေ့. ကပြင်လေးတွင်ရေနွေးကြမ်း သောက်ရင်းစောင့်နေမိသည်။
ဆိုသောခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ ချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ကြီး အူသံကြားရပြီးနောက် ရုံးရှေ့ သံတခါးဖွင့်သံကြားရပြီးး စက်ဘီးလေး တွန်းပြီး လူတစ်ဦး ဝင်လာနေ သည်။ တဖြည်းဖြည်း အနားနားရောက်မှ ရုံး စောင့်ကြီးဖြစ်မှန်းသိရသည်။
" ဟုတ်တယ် ဆရာလေးရေ့.. အိမ်မှာ မအားလို့"လေ ဟုပြောရင်း စက်ဘီးလေး ရပ်ကာ အိမ်ပေါ်တက်လာသည်။
နောက်တော့ စကားတပြောပြောနှင့် အိပ်ချင်လာသဖြင့်နှစ်ယောက်သား အိပ်ရာ ဝင်လိုက်ကြသည် ။
မနက်ရောက်တော့..ရုံးစောင့်ကြီးက မရှိတော့. .ဒီလိုနက်စောစောပြန်သွားတာနေမှာပါဟု တွေးရင်း အတွေး ပဟေဠိတွေဖြင့်. .တစ်ပတ် ကြာလာခဲ့လေပြီ။
အလုပ်က ပင်ပန်း တာကြောင့် ကိုကျော်သူ တစ်ယောက် ဒီနေ့စောစော အိပ်မယ် ဟုတွေးပြီး
၂၄ ပစ္စည်း .မေတ္တာသုတ်ရွက် .ပုတီးစိပ် စောစောအိပ်ယာဝင်ခဲ့သည်။
ရုံးစောင့်ကြီး လာရင် လွယ်ကူရန် တံခါးမကြီးစေ့ရုံမျှ စေ့ထားလိုက်သည်။
"""အီးးး..ဟီးး...ဟီးး....အီးးး" ဆိုသော ချွဲချွပျစ်ပျစ် ငိုသံကြီးကြောင့် ကိုကျော်သူမှာလန့်နိုးခဲ့ရသည်။
ခြင်ထောင်လှန်၍ကြည့်လိုက်ရာ ကျောပေးထိုင်နေသော ရုံးစောင့်ကြီး
" ဘာလို့..ငိုနေတာလဲဗျ.. ဘာများ စိတ်ညစ်စရာ ရှိလို့လဲ" ဒီတော့မှ ရုံးစောင့်ကြီးက သူ့ဘက် လှည့်လာပြီး
"ဆရာ. .ကျွန်တော် ရုံးကနေ..ထွက်လို့ မရတာ.လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)နှစ် ထဲကပါ..ကျွန်တော် အရင် အလုပ်လုပ်တဲ့.. ဆရာက...ကျွန်တော်သေတော့. .အမိန့်ပြန် တမ်းစာ မထုတ်ခဲ့ဘူးးး.. .ဒါကြောင့်ကျွန်တော် ဘဝကူးလို့ မရဘူး...အရင် အဆက်ဆက်က ဆရာတွေကိုပြောပေမဲ့ပြောင်းပြေးကျတာချည်းပါ ဆရာ.... ဆရာကနေပြီး.. ကျွန်တော့်ကိုပြန်တမ်းစာ ရွတ်ပေးပါ...ပြီးတော့ အမျှဝေပေးပါ ဆရာ"ဟုပြောရင်း အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားလေသည်။
ကိုကျော်သူလည်း အိပ်မက်မှ လန့်နိုးလာပြီး ထကြည့်လိုက်ရာ အိမ်တံခါး တစ်ချပ် ပိတ်သွားသည်ကိုတွေ့ ရလေသည်။ တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ဘဲ အတွေးများဖြင့်မနက်မိုး လင်းခဲ့ရလေသည်။
မနက် မိုးလင်းတော့.. အတွေးများစွာဖြင့် ရှုပ်ထွေးနေမိသည်။ ရုံးဝန်ထမ်းလေး တစ်ယောက်ရောက်မှ
"ဟေ့.. လာစမ်းပါအုံးးကွ..မေးစရာရှိလို့ "
ကိုကျော်သူလည်း သူရောက်ခဲ့တဲ့ ညက စ၍ တစ်ပတ်တိတိ ရုံးစောင့်ကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေပြောပြတယ် ဒါနဲ့ ဒီညမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အိပ်မက် မက်ကြောင်း ဒါကြောင့် ရုံးစောင့်ကြီး ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာ သိချင်ကြောင်းပြောပြတော့မှ ရုံးဝန်ထမ်းလေးက
"ဆရာ..ရုံးစောင့်ကြီးဦးအောင်ဘ က လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)နှစ် က.. ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးသေ သွားတာဆရာရဲ့. .ပြီးတော့သူက ရုံးမှာ မကျွတ်မ လွတ်ဘဲ ရှိနေခဲ့တာ. .ဆရာ့ထက် အရင် အရာရှိတွေ ကတော့ပြောင်းပြေးကြတယ်
ကျွန်တော်တို့က ဆရာ့ ကို အံ့သြနေကြတာ ရုံးစောင့်ကြီးနဲ့ မတွေ့ဘူး ဆိုပြီး"
" ဒါနဲ့ ဦးအောင်ဘ သေတော့ အမိန့်ုပြန်တမ်း မပေး ခဲ့ဘူးလား..သူ့လက်ထက်က ဆရာက "
"ဆရာရဲ့ .. ရုံးစောင့်ကြီး ဆုံးတော့သင်္ကြန်တွင်း ရုံးပိတ်ရက်ကြီးလေ.. ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အရာရှိ က မိသားစုရှိရာပြန်သွားတာ မရှိဘူးလေ..ပြန် ရောက်လာတော့လည်း ..မပေးဖြစ်ဘူး.. ဒီလိုနဲ့... ဆရာကပြောင်း သွားရတာ..နောက်လာတဲ့အရာ ရှိတွေကလည်း သရဲခြောက်တယ် ဆိုပြီးပြောင်း သွားကြတာနဲ့ ဆရာ့ လက်ထက်ထိ မပေးရသေးဘူး ဖြစ်နေတာ"
"ဟုတ်ပြီ..ဦးအောင်ဘက အမှန်တော့ခြောက်လှန့် နေတာမဟုတ်ဘူးး.ဘဝ ကူးချင်လို့ အမိန့်ပြန်တမ်း တောင်းနေတာ ..ခဏနေ လက် နှိပ်စက် စာရေးလာရင်..ပြန်တမ်း တစ်စောင်လောက် နှိပ်ခိုင်းပါ" ဟုပြောခိုင်း လိုက် သည်။
နေ့လယ်ပိုင်းရောက်တော့ ဦးအောင်ဘ ကိုခေါ်ဆို အမိန့်ပြန်တမ်း ရွတ်ပေး ... .အမျှပေးဝေပြီး နေ့လည်နေ့ခင်း အိပ်ချင်လာသဖြင့် အိမ်လေးရဲ့ ကွက်ပျစ်ပေါ် အိပ်နေလိုက်သည်။
"ဆရာ.ဆရာ "ဟု နိုးလာသော အသံကြားမှ ထကြည့်လိုက်ရာ သစ်လွင်တောက်ပ သောအဝတ်အစား များဖြင့်ကြည်လင်ပြုံးပြ နေသောရုံးစောင့်ကြီး....
" ဆရာ.. ကျွန်တော် သွားတော့မယ်..လွတ်လပ်သွား ပြီအနှောင်အဖွဲ့တွေ မရှိတော့ဘူးး ဆရာ့ကို လာနှုတ်
ဆက်တာ ဟုပြောရင်း စက်ဘီးလေး စီးကာ ထွက်သွားလေသည်။
"အေးကွ.. အဲ့ဒီနေ့ည ကစပြီးး ငါ တခြားမြို့ကလေးပြောင်းလာတဲ့အချိန်ထိ အရိပ် အယောင်ကို မမြင်ရတော့တာ လှမျိုးရေ"
"မင်းလည်း အရာရှိ တစ်ယောက်ဖြစ်တော့မှာ ဆိုတော့မမေ့သင့်တဲ့ အရာဘဲကွ..မင်း မဖတ်ပေးလိုက် တဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းသာ ကြာတဲ့ အမိန့်ပြန်တမ်းစာလေး တစ်ခုကြောင့်..သနားစရာ ပရလောကသားတွေကိုး..ဘဝမကုး မကျွတ်မလွတ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်...
ကဲကဲ..... စကားပြောလို့လည်းကောင်းလိုက်တာ မိုးချုပ်တော့မယ်..အိမ်က မဟေသီကြီးမျှော်နေလောက်ပြီ" ဟုပြောရင်းး ဦးကျော်သူ တစ်ယောက်.. ကားကြီးမောင်းပြီး အိမ်ဝင်းထဲက ထွက်သွားခဲ့လေပြီ။
တဈနသေ့ောညနပေိုငျး၌.. ကိုလှမြိုး တဈယောကျ ရာထူးတိုးဖွငျ့.အပွောငျးအရှေ့ ကသြဖွငျ့ မိတျဆှေ အပေါငျး အသငျးမြားအားနှုတျဆကျ ပှဲလုပျပွီး..ဧညျ့ခနျး၌ ထိုငျနသေညျ။
" သမီးရေ..ခွံရှမှေ့ာ. ဧညျ့သညျ လာတယျ.. သှားကွိုလိုကျပါအုံးကှယျ"ဟု သမီးအငယျမ ကို သှားကွိုခိုငျး လိုကျ သညျ။
"ဟကေ့ောငျ လှမြိုး မငျးရာထူးတိုးပွီ ဆိုကှ"ဟုပွောရငျး လာနသေူက..ကိုလှမြိုးအကွီးတနျးစာ ရေး တာဝနျထမျးဆောငျစဉျက..ဆရာဖွဈသူ ဦးကြျောသူပငျဖွဈသညျ။
"ဆရာ လာဗြာ ထိုငျအုံး ကြှနျတျောလညျး ခဏကမှ မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျးတှပွေနျသှားလို့ နားနတောဗြ...သမီးရေ. ဆရာ့အတှကျ.. စားစရာလေး ဘာလေး တညျခငျးပါအုံးကှယျ"
"ကောငျးပါတယျကှာ..ဝနျးထမျး ဆိုတော့..ကရြာနရော တာဝနျထမျးဆောငျရသကိုး"
ဆရာ တပညျ့နှဈယောကျ စပျမိစပျရာစကားပွော ကွရငျးဦးကြျောသူ က
"ဒါနဲ့မငျးကိုပွောရအုံးမယျဟေ့..ငါ..မွတုံမွို့ လေးမှာ...တာဝနျကတြုံးကပေါ့ကှာ..အခု ငါက ပငျစငျတောငျယူပွီးပွီ ဆိုတော့နှဈတှကေကွာပါပွီ" ဟုအစပွုရငျး.......
ကိုကြျောသူ တဈယောကျ..အပွောငျး အရှဖွေ့ငျ့ တာဝနျကရြာ မွတုံမွို့လေးသို့ ..မီးရထားဖွငျ့ လိုကျပါ လာခဲ့သညျ။ လူပြို လူလှတျတဈယောကျ ဖွဈသဖွငျ့ တာဝနျကရြာမွို့လေးသို့ပေါ့ပေါ့ပါး ပွောငျးရှနေ့လေို့ ရ သညျ။ အခကျအခဲမရှိ။
တဈခြို့သော ပစ်စညျးတှကေ တနျဆာ ရိုကျပွီး ပို့ ထားပွီးပွီ။ အခုတော့လှတျလှတျ လပျလပျ အိတျ ကလေးတဈလုံးဖွငျ့သာ လာခဲ့သညျ။ ရထားကွီးကလညျး တဈဘူတာဝငျ တဈဘူတာထှကျ အရှိနျနှငျ့ခုတျမောငျးလာခဲ့သညျ။ ကိုကြျောသူလညျး ရှုခငျးတှကွေညျ့ရငျးလိုကျပါ လာခဲ့ရာညနစေောငျးလာလပွေီ။
မွတုံမွို့လေးသို့နောကျ အခြိနျကွာကွာ စီးရအုံးမညျ။ ည ၈နာရီခနျ့မှသာ ရောကျမညျ။
"ပူးပျေါ"ဆိုသော ရထားဥသွဆှဲသံနှငျ့ အတူ မွတုံမွို့ဘူတာသို့ ဆိုကျရောကျခဲ့လပွေီ။ လူသူ အဆငျး နညျးသောမွတုံ ဘူတာလေးမှာ မီး လေးကလညျး ခပျမှိနျမှိနျသာ ရှိသညျ။ တောမွို့လေး ဆိုတော့လညျး ဟုတျပေ မပေါ့။
ကိုကြျောသူ ခရီးဆောငျအိတျကလေးဆှဲကာ ဘူတာက ထှကျလာတော့..ဘူတာရှမှေ့ာ ဆိုကျထား တဲ့ ဆိုကျကားလေး သုံးလေးစီးသာရှိသညျ။
"ဆိုကျကားငှားမယျဟေ့" ဆိုတော့အလှညျ့ကြ ဆိုကျကားသမားလေး က
"စီးပှားဘဏျကို ပို့ပေးပါကှာ "
"ဟုတျကဲ့ဗြ"ဟုပွောရငျး ဆိုကျကားသမားလေး က သူ့လကျထဲက ခရီးဆောငျအိတျကို ယူပွီး ဆိုကျကား
ပျေါတငျကာ.. "တကျ..ဆရာ" ဟုပွောရငျး ဆိုကျကားလေး နငျးထှကျခဲ့လသေညျ။
ဆိုကျကားသမားလေးနဲ့ စကားတပွောပွောဖွငျ့ ခဏကွာတော့ ဆိုကျကားသမားလေး က
ကိုကြျောသူ တဈယောကျ ၁၅ကပျြတနျ တဈရှကျ ထုတျပေးရငျး နာရီ တဈခကျြငုံ့ကွညျ့မိသညျ ။
ကိုးနာရီတောငျ ထိုးသှားပွီ။ ဆိုကျကား သမားလေး က နှုတျဆကျရငျး ထှကျသှားလပွေီ။ ကိုကြျောသူ တဈယောကျ အထုတျလေး မပွီးရုံး ဝငျးတံခါးပေါကျရှေ့ ရပျနမေိသညျ။
ရုံးကလေးမှာ တဈထပျတိုကျ ကလေးသာဖွဈပွီး။ တာဝနျကရြာ ဝနျထမျး အိမျကလေး က အိမျခွပေုလေး သရကျပငျတှကွေားထဲမှာ..
"ဆရာ..က ဒီကို တာဝနျကတြဲ့ ဆရာ အသဈထငျတယျ" ဟုယောကျြားသံ သွသွကွီးကွားမှ သူ့ရှတှေ့ငျခွံ
တံခါးဖှငျ့ပေးနသေော ရုံးစောငျ့ဟု ထငျရသော အသကျ၄၀ကြျော အရှယျလူကွီး တဈယောကျ။ အဲ့ဒီတော့ မှ သူလညျးခွံထဲ ဝငျဖို့သတိရသညျ။
ထိုလူကွီးက. သူ့လကျမှ အိတျကို ကူသယျပေးရငျး
"လာ.လာ ဆရာ."ဟုချေါပွီး ဝနျထမျးအိမျလေး ဆီသို့ ချေါလာခဲ့သညျ။
ဟုခြှဲခြှဲ ပွဈပွဈ အူလိုကျသောခှေးသံ ကွီးကွောငျ့ ကွကျသညျး ထသှားရသညျ။ အိမျထဲတှငျလဲ မီးက ခပျမှိနျမှိနျလေးသာ ထှနျးထားသညျ။
"ဆရာ..ဘာစားခဲ့ပွီလဲ..ဘာပွငျဆငျပေးရအုံး မလဲ" ဟုမေးနကော.အိပျယာခငျးတှပွေငျပေးနသေညျ။
"တျောပါပီ.ဗြာ. မစားတော့ဘူး"ဟုပွောရငျး ရနှေေးကွမျးငှဲ့သောကျနမေိသညျ။
နောကျတော့..ထိုလူကွီးက မီးမှိနျမှိနျအောကျတှငျ သူရှေ့ လာထိုငျးပွီး ရနှေေး တဈခှကျငှဲ့ကာ
"ဆရာရေ့.. ကြုပျတို့မွို့ ကတောမွို့လေး ဆိုတော့ သိပျ မပွညျ့စုံဘူးပေါ့ဗြာ...ဟိုဘကျက ဝငျးက ဘောလုံးကှငျး.." ဟု ရှငျးပွနလေသေညျ။
"စကားပွောကောငျးနလေိုကျတာ..ဆရာ. ကြှနျတျောက ဒီရုံးက..ရုံးစောငျ့. ဦးအောငျဘ ပါ. ဒီမွို့ခံပါဘဲ.. ကြှနျတျောက ညစောငျ့ပေါ့..
မနကျဆို အိမျပွနျတယျ..ကနျြတဲ့ ရုံးဝနျထမျးတှမွေို့ ခံလူတှေ ဆိုတော့မနကျမှဘဲ လာ..ကွတယျ"ဟု ပွောရငျးရနှေေး တဈခှကျ ငှဲ့လိုကျပွနျသညျ။
"ဆရာက လူလှတျ ဆိုတော့..ကြှနျတျောက..ဒီမှာ အိပျရုံပေါ့.. မိသားစု ပါရငျ.."ဟို အနောကျက တဲလေး
မှာ အိပျတယျ..မနကျဆိုပွနျတော့ ကိစ်စမရှိဘူးပေါ့"
"စကားပွောကောငျးနလေိုကျတာ..ဆရာ ခရီးပနျး လာတော့ အိပျတော့လေ" ဟုပွောရငျးရနှေေး အိုးတှေ သိမျးနလေသေညျ။
ကိုကြျောသူလညျး ညညျးစီစီနသေဖွငျ့.. "ကြှနျနျော ကိုယျလကျဆေးခွငျတာဗြာ"
"အေးအေး" ဟုပွောပွီးရတှေငျး ရှိရာသို့ လာခဲ့သညျ။
ရတှေငျးနားရောကျတော့လအေေးတဈခကျြ က မကျြနှာကို ရိုကျသှားသညျ။ နောကျ ပုပျအဲ့အဲ့ အနံ့တဈခု ဝငျလာသညျ။
အကောငျဘလောငျ ပုပျပွီးသထေားတာနမှောပါ ဟုတှေးရငျး ကိုယျလကျ သနျ့စငျပွီး သှားမညျ အပွု လှညျ့ လိုကျရာ..သူ့ အနောကျတှငျ ဘယျအခြိနျကရောကျနသေညျ မသိတဲ့. ရုံးစောငျ့ ကွီး..သူ့ကိုကွညျ့နေ သညျ။
"ဆရာလေး အတှကျ..တဘကျ လာပေးတာပါ" ဟုပွောရငျး သူ့ကို ကမျးပေးနသေညျ။
ကိုကြျောသူလညျး ကမျးပေးသော တဘကျကို ယူပွီး အိမျရှိရာသို့.လာခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ရုံးစောငျ့ကွီးပွငျပေးထားသော.. အိပျယာတှငျ.. နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျော သှားခဲ့လသေညျ။
ရုံးစောငျ့ကွီး ကတော့.သူ့နားဘေးနား ကပျရကျ ခွငျထောငျ တဈလုံးထောငျ၍နှဈယောကျသား နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျော သှားခဲ့ကွလသေညျ။
အျောနိုးနသေော အသံတဈခုကွောငျ့ ကိုကြျောသူ အိပျယာမှ နိုးခဲ့ရသညျ။ ညက သူ့ဘေးနားမှာ အိပျနသေော ရုံးစောငျ့ ကွီးမှာ မရှိတော့.. အိပျယာခငျးတှရေော ဒီရုံးစောငျ့ ငါ့လညျး မနိုးသှားပါလား ပွနျသှားပွီထငျပ ဟုတှေးရငျး အိမျအပွငျဘကျသို့ ထှကျလာခဲ့သညျ။ အိမျလေး က ခါးလောကျသာမွငျ့သညျ။
ညက ရုံးစောငျ့ကွီးရဲ့ စကျဘီးလို့ ထငျရတဲ့ ယောကျြားစီး စကျဘီးကွီးလညျး မရှိတော့ .. ဟုတျပွီပွနျသှားပွီနမှော..ငါ့ကို ပငျပနျးလို့ မနိုးသှားတာထငျပ ဟုတှေးလိုကျသညျ။
"ဆရာည.က အဆငျပွလေားဗြ..ကြှနျတျောတို့.. စောငျ့နသေေးတယျဆရာရေ.. မိုးခြုပျ လာတော့ ပွနျသှား ကွတာ.. ညက ဘာမှမဖွဈပါဘူးနျော"..ရုံးဝနျ ထမျးလေးက ဘာအတှေးနဲ့မေးသညျ မသိ.
"အဆငျပွပေါတယျကှာ.. ငါမကျြနှာသဈ ဘုရားရှိခိုး ပွီးမှ ရုံးထဲ လာခဲ့မယျ"ပွောရငျး သူ ဆပျပွာခှကျ ကလေး ကိုငျကာရတှေငျးဆီသို့ သှားခဲ့သညျ။
တဈနလေုံ့း ဝနျထမျးတှနေဲ့. .ရောကျရောကျခွငျး နဖွေ့ဈသဖွငျ့.အလုပျတှေ ရှုပျနပွေီး ရုံးစောငျ့ကွီး အကွောငျးမနေ့ေ ခဲ့သညျ။ ရုံးဆငျးခြိနျရောကျတော့ ဝနျထမျးတှေ အားလုံးပွနျသှားကွပွီ။ ရုံးစောငျ့ကွီး ကတော့ ရောကျမလာသေး.. ဒီလိုနဲ့ည နေ နဝေငျသှားပွီ..သူလညျး အရောငျက ခပျမှိနျမှိနျ ..မီးသီးလေး
ထှနျးရငျး ..အိမျရှေ့. ကပွငျလေးတှငျရနှေေးကွမျး သောကျရငျးစောငျ့နမေိသညျ။
ဆိုသောခှေးတဈကောငျရဲ့ ခြှဲခြှဲပွဈပွဈကွီး အူသံကွားရပွီးနောကျ ရုံးရှေ့ သံတခါးဖှငျ့သံကွားရပွီး စကျဘီးလေး တှနျးပွီး လူတဈဦး ဝငျလာနေ သညျ။ တဖွညျးဖွညျး အနားနားရောကျမှ ရုံး စောငျ့ကွီးဖွဈမှနျးသိရသညျ။
" ဟုတျတယျ ဆရာလေးရေ့.. အိမျမှာ မအားလို့"လေ ဟုပွောရငျး စကျဘီးလေး ရပျကာ အိမျပျေါတကျလာသညျ။
နောကျတော့ စကားတပွောပွောနှငျ့ အိပျခငျြလာသဖွငျ့နှဈယောကျသား အိပျရာ ဝငျလိုကျကွသညျ ။
မနကျရောကျတော့..ရုံးစောငျ့ကွီးက မရှိတော့. .ဒီလိုနကျစောစောပွနျသှားတာနမှောပါဟု တှေးရငျး အတှေး ပဟဠေိတှဖွေငျ့. .တဈပတျ ကွာလာခဲ့လပွေီ။
အလုပျက ပငျပနျး တာကွောငျ့ ကိုကြျောသူ တဈယောကျ ဒီနစေ့ောစော အိပျမယျ ဟုတှေးပွီး
၂၄ ပစ်စညျး .မတ်ေတာသုတျရှကျ .ပုတီးစိပျ စောစောအိပျယာဝငျခဲ့သညျ။
ရုံးစောငျ့ကွီး လာရငျ လှယျကူရနျ တံခါးမကွီးစရေုံ့မြှ စထေ့ားလိုကျသညျ။
"""အီး..ဟီး...ဟီး....အီး" ဆိုသော ခြှဲခြှပဈြပဈြ ငိုသံကွီးကွောငျ့ ကိုကြျောသူမှာလနျ့နိုးခဲ့ရသညျ။
ခွငျထောငျလှနျ၍ကွညျ့လိုကျရာ ကြောပေးထိုငျနသေော ရုံးစောငျ့ကွီး
" ဘာလို့..ငိုနတောလဲဗြ.. ဘာမြား စိတျညဈစရာ ရှိလို့လဲ" ဒီတော့မှ ရုံးစောငျ့ကွီးက သူ့ဘကျ လှညျ့လာပွီး
"ဆရာ. .ကြှနျတျော ရုံးကနေ..ထှကျလို့ မရတာ.လှနျခဲ့တဲ့ (၅)နှဈ ထဲကပါ..ကြှနျတျော အရငျ အလုပျလုပျတဲ့.. ဆရာက...ကြှနျတျောသတေော့. .အမိနျ့ပွနျ တမျးစာ မထုတျခဲ့ဘူး.. .ဒါကွောငျ့ကြှနျတျော ဘဝကူးလို့ မရဘူး...အရငျ အဆကျဆကျက ဆရာတှကေိုပွောပမေဲ့ပွောငျးပွေးကတြာခညျြးပါ ဆရာ.... ဆရာကနပွေီး.. ကြှနျတျော့ကိုပွနျတမျးစာ ရှတျပေးပါ...ပွီးတော့ အမြှဝပေေးပါ ဆရာ"ဟုပွောရငျး အိမျပျေါမှဆငျးသှားလသေညျ။
ကိုကြျောသူလညျး အိပျမကျမှ လနျ့နိုးလာပွီး ထကွညျ့လိုကျရာ အိမျတံခါး တဈခပျြ ပိတျသှားသညျကိုတှေ့ ရလသေညျ။ တဈညလုံး အိပျမပြျောဘဲ အတှေးမြားဖွငျ့မနကျမိုး လငျးခဲ့ရလသေညျ။
မနကျ မိုးလငျးတော့.. အတှေးမြားစှာဖွငျ့ ရှုပျထှေးနမေိသညျ။ ရုံးဝနျထမျးလေး တဈယောကျရောကျမှ
"ဟေ့.. လာစမျးပါအုံးကှ..မေးစရာရှိလို့ "
ကိုကြျောသူလညျး သူရောကျခဲ့တဲ့ ညက စ၍ တဈပတျတိတိ ရုံးစောငျ့ကွီးနဲ့တှခေဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြတှပွေောပွတယျ ဒါနဲ့ ဒီညမှာ ထူးဆနျးတဲ့ အိပျမကျ မကျကွောငျး ဒါကွောငျ့ ရုံးစောငျ့ကွီး ဘာဖွဈသလဲဆိုတာ သိခငျြကွောငျးပွောပွတော့မှ ရုံးဝနျထမျးလေးက
"ဆရာ..ရုံးစောငျ့ကွီးဦးအောငျဘ က လှနျခဲ့တဲ့ (၅)နှဈ က.. ဦးနှောကျသှေးကွောပွတျပွီးသေ သှားတာဆရာရဲ့. .ပွီးတော့သူက ရုံးမှာ မကြှတျမ လှတျဘဲ ရှိနခေဲ့တာ. .ဆရာ့ထကျ အရငျ အရာရှိတှေ ကတော့ပွောငျးပွေးကွတယျ
ကြှနျတျောတို့က ဆရာ့ ကို အံ့သွနကွေတာ ရုံးစောငျ့ကွီးနဲ့ မတှဘေူ့း ဆိုပွီး"
" ဒါနဲ့ ဦးအောငျဘ သတေော့ အမိနျု့ပွနျတမျး မပေး ခဲ့ဘူးလား..သူ့လကျထကျက ဆရာက "
"ဆရာရဲ့ .. ရုံးစောငျ့ကွီး ဆုံးတော့သင်ျကွနျတှငျး ရုံးပိတျရကျကွီးလေ.. ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ အရာရှိ က မိသားစုရှိရာပွနျသှားတာ မရှိဘူးလေ..ပွနျ ရောကျလာတော့လညျး ..မပေးဖွဈဘူး.. ဒီလိုနဲ့... ဆရာကပွောငျး သှားရတာ..နောကျလာတဲ့အရာ ရှိတှကေလညျး သရဲခွောကျတယျ ဆိုပွီးပွောငျး သှားကွတာနဲ့ ဆရာ့ လကျထကျထိ မပေးရသေးဘူး ဖွဈနတော"
"ဟုတျပွီ..ဦးအောငျဘက အမှနျတော့ခွောကျလှနျ့ နတောမဟုတျဘူး.ဘဝ ကူးခငျြလို့ အမိနျ့ပွနျတမျး တောငျးနတော ..ခဏနေ လကျ နှိပျစကျ စာရေးလာရငျ..ပွနျတမျး တဈစောငျလောကျ နှိပျခိုငျးပါ" ဟုပွောခိုငျး လိုကျ သညျ။
နလေ့ယျပိုငျးရောကျတော့ ဦးအောငျဘ ကိုချေါဆို အမိနျ့ပွနျတမျး ရှတျပေး ... .အမြှပေးဝပွေီး နလေ့ညျနခေ့ငျး အိပျခငျြလာသဖွငျ့ အိမျလေးရဲ့ ကှကျပဈြပျေါ အိပျနလေိုကျသညျ။
"ဆရာ.ဆရာ "ဟု နိုးလာသော အသံကွားမှ ထကွညျ့လိုကျရာ သဈလှငျတောကျပ သောအဝတျအစား မြားဖွငျ့ကွညျလငျပွုံးပွ နသေောရုံးစောငျ့ကွီး....
" ဆရာ.. ကြှနျတျော သှားတော့မယျ..လှတျလပျသှား ပွီအနှောငျအဖှဲ့တှေ မရှိတော့ဘူး ဆရာ့ကို လာနှုတျ
ဆကျတာ ဟုပွောရငျး စကျဘီးလေး စီးကာ ထှကျသှားလသေညျ။
"အေးကှ.. အဲ့ဒီနညေ့ ကစပွီး ငါ တခွားမွို့ကလေးပွောငျးလာတဲ့အခြိနျထိ အရိပျ အယောငျကို မမွငျရတော့တာ လှမြိုးရေ"
"မငျးလညျး အရာရှိ တဈယောကျဖွဈတော့မှာ ဆိုတော့မမသေ့ငျ့တဲ့ အရာဘဲကှ..မငျး မဖတျပေးလိုကျ တဲ့ စက်ကနျ့ပိုငျးသာ ကွာတဲ့ အမိနျ့ပွနျတမျးစာလေး တဈခုကွောငျ့..သနားစရာ ပရလောကသားတှကေိုး..ဘဝမကုး မကြှတျမလှတျဖွဈစနေိုငျတယျ...
ကဲကဲ..... စကားပွောလို့လညျးကောငျးလိုကျတာ မိုးခြုပျတော့မယျ..အိမျက မဟသေီကွီးမြှျောနလေောကျပွီ" ဟုပွောရငျး ဦးကြျောသူ တဈယောကျ.. ကားကွီးမောငျးပွီး အိမျဝငျးထဲက ထှကျသှားခဲ့လပွေီ။